Ski Dubai nwere ngwugwu njem nlegharị anya Desert Safari
Chọgharịa Dubaieze 212022-05-23T17:14:45+05:30
Gaa na Dubai
Ụbọchị ehihie na abalị / 05 ga -anọ n'ụlọ nkwari akụ Five Star Dubai gụnyere nri ụtụtụ.
Ịnweta Ski Dubai - Snow Park na-enyefe nkwụghachi na oche na ndabere nchịkwa.
Nbudata na mbupụ gaa na họtelu ga-anọ na ụgbọ ala ekekọrịta.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Jikere maka ịhụ snow na Dubai. Gbalịa ihe agaghị ekwe omume na Dubai - gaa na ski na ọzara. N'ịbụ nke dị n'ime nnukwu ụlọ ahịa nke Emirates, ị ga-ahụ otu n'ime ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ, ihe ngosi na ihe nkiri na-akpali akpali nke a na-ahụ na Middle East.
Ị nwere ike ịmata ya nke ọma site n'ebe dị anya - ọ bụ ụlọ ahụ dara ada nke dị n'elu nnukwu ụlọ ahịa. N'ịbụ nke ụyọkọ chalet na ụlọ oriri na ọ restaurantsụroundụ gbara ya gburugburu, ọ nweghị ihe dị ka ịgba ọsọ ka ị na -ele ndị na -azụ ahịa na -agafe na windo gbara ya gburugburu.
Ụdị ụlọ: Ime ụlọ dị elu price
Ịkekọrịta Otu $ 909
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 645
Agba okenye ọzọ $ 620
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 448
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ $ 564
Aha ụlọ nkwari akụ: The Canvas Dubai, Mgallery Site Sofitel ma ọ bụ ihe yiri ya